खाली निलो स्पष्ट ब्लूबेलु गर्भावस्था परीक्षण समीक्षा, निर्देशनहरू
खुशी यति नजिक थियो, तर हाय। गर्भवती गर्भवती नचिनाउन! तर प्रतिक्रियाहरूमा गर्भवती महिलाहरूको लागि चेतावनी छ ताकि तिनीहरू मलाई के भयो भनेर तिनीहरूलाई हुनेवाला थिएनन्।
शुभ दिन! गर्भावस्था कुनै पनि महिलाको जीवनमा एकदम जिम्मेवार अवधि हो। तपाईलाई थाहा छ, गर्भावस्था निर्धारण गर्न एक परीक्षाको माध्यमबाट तपाईंलाई मद्दत गर्न सकिन्छ, जुन तपाईं सम्भाव्यता को धेरै संग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ कुनै गर्भावस्था छ कि छैन भने तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। म तिमीलाई मेरो दुखद कथा बताउँछु।
<< p> डिजिटल गर्भावस्था परीक्षण क्लिस्टब्ल्यूबले सर्तमा गलत गलत छ ????????? चाखलाग्दो परीक्षा, कुन शब्दले गर्भावस्थाको बारेमा भन्नेछ, तर धेरै मूल्यको आशा नगर्नुहोस्
बधाई व्यक्तिहरूलाई अभिवादन छ! गर्भावस्था परीक्षण फार्मेसीहरूको वर्गीकरणको एक महत्त्वपूर्ण विषय हो। सबैजना होइन र सधैं तिनीहरू सान्दर्भिक छन्, तर जब यो शीर्षक नजिक छ, तिनीहरू प्याकले किनेको हुन्छन्। मेरो गर्भावस्था योजना बनाईएको थियो, तर यो क्षण द्वारा अप्रत्याशित थियो।
डिस्ट्रिसमा उर्दीबाट? वा देखिन्थ्यो? सस्तो, तर सही गर्भावस्था परीक्षण। कसरी गर्भावस्था परीक्षण कार्यहरू र मेरो प्रयोग अनुभव।
नमस्कार! गर्भावस्थाको लागि सबैभन्दा सही परीक्षण के हो? के परीक्षणको गुणवत्ता मूल्यमा निर्भर गर्दछ? कुन परीक्षण अझ सही छ? के यसले अधिक तिर्नुपर्ने अर्थ दिन्छ? धेरै प्रश्नहरू उत्तराधिकारी हुन्छन् जब तपाईंलाई गर्भावस्था परीक्षण किन्नु आवश्यक छ।
विशेषता derghuniencypeanclululue: Rs0 आईआरए एचसीजीबाट,%, टेस्ट बचत प्रति हेक्टर हो वा होईन, एक स्पष्ट परिणाम हो। Arance गुणवत्ता।
कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्लेक्सब्ल्यूकेल टेस्टले 1 मिनेटमा अन्तिम उत्तर दिन्छ वा होईन।
oooooo, समुद्री आँसुहरू! मेरो श्रीमानसँग मेरो कुराकानीबाट ठूलो आँखा थियो। र त्यसैले मुट्ठीमा घुमाउँदा म परीक्षणको बारेमा पढ्न इन्टरनेटमा चढें।
कुन महिलालाई गर्भावस्थाको योजना बनाउँदै छ वा उनीहरु लाई सुझाव दिन्छन् कि उनी आउन सक्छिन्, माभिजिंग जब मासिक धर्मलाई नष्ट गर्दछ? अवश्य पनि, यसले यस प्रकारको उत्पादन खरीद गरिरहेको छ, तपाईं लगभग प्रत्येक फार्मेसी नेटवर्क वा नजिकको सुपरमार्केट खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
हाल गर्भावस्था निर्धारणको लागि धेरै साधनहरू छन्। ती सबै प्रजातिहरूमा विभाजन छन्।
गर्भावस्था परीक्षणको प्रकारहरू
टेस्ट स्ट्रिप प्रयोगको सिद्धान्तमा निर्भर गर्दै, साग्रार्थको उपस्थिति वा अनुपस्थितिलाई निम्न सदस्यहरूमा विभाजन गरिएको छ:
गर्भावस्था परीक्षण क्लिभब्ल्यू
सुन्दर यौन प्रतिनिधिहरूको गलत लोकप्रियता यस ब्रान्ड जित्यो। निर्माताले तीन प्रकारका टेक्स्ट स्ट्रिपहरू उत्पादन गर्दछ:
यी परीक्षणहरू निर्माणकर्ताहरूले गर्भवतीको परिभाषा पहिले नै हप्ताको कथित रूपमा गर्भावस्थाको परिभाषा वचन दिएका छन्। यसले अन्य फर्महरूको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। तसर्थ, यदि तपाइँ कन्भेंजेसन प्लेस, गर्भावस्था परीक्षण क्राउडब्ल्यू माथि तपाईलाई आवश्यक छ भने पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न।
परीक्षण योजनामा ​​निर्भर गर्दछ जुन तपाईंले रोज्नु भएको उत्पादनको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं एक स्पष्टबल गर्भावस्था परीक्षण खरीद गर्नुहुन्छ, निर्देशन जहिले पनि प्याकेजमा संलग्न हुन्छ। यो उपकरणको प्रकारसँग मिल्छ जुन तपाईंले रुचाउनु भयो।
बिहान घडीमा परीक्षण गर्न सिफारिस गरिन्छ, यो उठे पछि तत्काल वांछनीय छ। यो मासिक धर्मको ढिलाइ हुनु अघि अध्ययन गरिएको अवस्थामा यसले केसहरूलाई बुझाउँदछ। यदि तपाईं पहिल्यै अवलोकन गरिरहनुभएको छ भने, हेरफेरको कुनै पनि समयमा हेरफेर गर्न सकिन्छ, तपाईंको सुविधाजनक।
गर्भावस्था परीक्षण के राम्रो
परीक्षणको केहि समूहहरू फार्मेसीहरूमा प्रस्तुत हुन्छन्। तिनीहरूको कामको सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमा समान छ - रिपोर्गेन्टका कारण Chorionic Gonadotroper को स्तर निर्धारण गर्दै - एन्टिबडीहरू HCG मा एन्टिबडीहरू। यो हर्मोन एक गर्भवती महिलाको शरीरमा, म्यानपेयरेज र केही रोगहरूको घटनामा (ट्यूमरहरू) को घटनामा देखा पर्दछ। यदि नतीजा नकारात्मक छ भने, एक रेखा देखा पर्नेछ। यदि त्यहाँ एक "दुश्मन" हर्मोन एन्टिबडीहरूले दोस्रो लाइन को चित्रण गर्छन्।
HCG स्तर निषेचन पछि --9 दिन पछि कम कम कम छ, त्यसैले कुनै पनि परीक्षा गर्भधारणलाई पहिचान गर्न सक्षम छैन। सामान्यतया, परिणाम ढिलाइको 1-2 दिनमा देखा पर्दछ, र हार्मोनको उत्पादन प्रत्येक दोस्रो दिनको लागि बढ्दै छ। निषेचित पछि अधिकतम शुद्धता 1 14-1-16 दिन पछि प्राप्त हुन्छ।
इलेक्ट्रोनिक गर्भावस्था परीक्षण क्लिभब्ल्यूअब्ल
यदि एक महिला गर्भावस्थामा संकेतमा याद गर्नुहोस्, उनी आफ्नो अवस्थाको बारेमा द्रुत रूपमा सिक्न चाहन्छिन। अब यो घरमा गर्न सजिलो छ, गर्भावस्था निर्धारण गर्ने एक परीक्षण किन्नु। तिनीहरू पनि लागूको मूल्य र विधिको विधि पनि हुन्। सब भन्दा सहि र सुविधाजनक मध्ये एक हाल स्पष्टब्ल्यूब डिजिटल टेस्ट हो। परम्परागत परीक्षण स्ट्रिपहरूबाट ऊसँग धेरै महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्, धन्यबाद जसले तपाईंलाई द्रुत र भरपर्दो नतिजा प्राप्त गर्दछ।
इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट क्लिस्टब्ल्यू बेवकूफ प्लास्टिक डिस्पोजल उपकरणको डिजिटल स्क्रिनको साथ एक आय ong प्लास्टिक डिस्पोजल उपकरण हो। यसको अन्तमा एक शोषक स्ट्रिप एक निलो टिप अन्तर्गत लुकेको छ। यो एक अत्यधिक संवेदनशील संकेत हो जसले मूत्रमा निश्चित हार्मोनल पदार्थको उपस्थितिलाई प्रतिक्रिया गर्दछ। परीक्षण एक inmetmimally छाप लगाइएको पन्ली मानिन मा राखिएको छ, र त्यसपछि एक कार्डबोर्ड बक्स मा।
यस उपकरणलाई धन्यवाद, एक महिलाले गर्भावस्थाको तथ्यलाई सहि निर्धारण गर्न सक्षम छ। बेघर परीक्षण स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स वा ईन्काजेट परीक्षणहरू प्रयोग गरेर निदानहरू उस्तै तरीकाले देखा पर्दछ, डिजिटल चर्मडब्ल्यूटीएचले HCG हर्मोनट स्तर तोक्छ, जुन अनुसन्धानको पछि लाग्न थाल्छ जुन अभिव्यक्ति पछि अवधारणाको सुरू हुन्छ।
<< p> तुरून्त पेशाबको साथ लगत्तै पछि, एक घण्टाको विपरीत आइकन प्रदर्शनमा देखा पर्यो र यसको पर्याप्त परिक्षणको पर्याप्त अपरेशनको संकेत गर्दै। स्क्रिनमा जानकारी प्रशोधन गरेपछि, स्पष्ट परिणाम देखा पर्दछ, र सकारात्मक परीक्षणको साथ - र गर्भपातपत्र।
उच्च सटीकता। निर्माता नोटहरूको रूपमा, परीक्षणले k99% को शुद्धताको साथ एचसीजी प्रस्तुत गर्दछ। गर्भावस्थाको अवधि निर्धारण गर्ने सटीकताको रूपमा, यो% 2% छ।
प्रयोगका लागि निर्देशनहरू
क्लोभब्ल्यूएब्लल डिजिटल टेस्ट प्रयोग गर्नु अघि, तपाइँ लाइनरसँग परिचित हुनु आवश्यक छ, जुन उपकरणसँग बेचिन्छ। यो सबै आवश्यक जानकारी चित्रहरु द्वारा पूरक छ। स्पष्ट चित्रणहरू र सम्भावित प्रश्नहरूको सूची र परीक्षण सञ्चालन गर्दा सामान्य त्रुटिहरू वेवास्ता गर्न मद्दत गर्दछ।
निर्माता अनुसार परीक्षण, परीक्षणको कुनै पनि समयमा ढिलाइको पहिलो दिन सुरु हुने दिनमा सम्भव छ। यद्यपि, परिणाम अधिक सटीक छ, साथै मासिक धर्मको सुरुको अपेक्षित मितिको लागि अध्ययनको मामलामा, बिहान सबेरै पेशाब लिनु उत्तम हो। थप रूपमा, सर्वेक्षण भन्दा पहिले, यो धेरै तरल पदार्थ प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
सामान्य रूपमा, सबैले गर्भावस्थाको बारेमा 8 डीपीओ परीक्षण ईवा गरे र उनले कमजोर दोस्रो पट्टी देखाए।2दिन पछि, मेरो खैरो मर्दाना सुरु भयो, र म खाली निलोको परीक्षा भन्दा परबाट भाग्यो र उसले मलाई 1-2 देखायो! म अल्ट्रासाउन्डमा दौडिरहेको छु, म यति धेरै भन्छु र त्यसैले म एक सकारात्मक परीक्षण र बाहिर खैरो देखिन्छ, म गर्भाशय वा कुनै गर्भावस्थामा खुसी छु, भर्खरै त्यो गर्दिन, मात्र त्यो देखियो फल अण्डाको लागि तयार भएमा केहि भित्ताहरू बाँकी छन् (किताबको पिउने) भने।
परीक्षण खाली निलो इलेक्ट्रोनिक perce दिन पहिले मासिक धर्मले देखाएको छ कि अर्को परीक्षणमा गर्भवतीले एक दोस्रो कमजोर स्ट्रिप जारी गरेको छ?